?Inta la hubo dhimashadu way isi soo tartay, galabtana waxaa dhintay 4 ka mida dhaawacyadii ciidanka Somaliland? Nabadoon Xasan Faarax – Radio Daljir
?Inta la hubo dhimashadu way isi soo tartay, galabtana waxaa dhintay 4 ka mida dhaawacyadii ciidanka Somaliland? Nabadoon Xasan Faarax
Ceerigaabo, Nov, 07 ? Wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan waxyaaladii ka dhalatay dagaalkii shalay degmada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag ku dhexmaray ciidamo ka tirsan Somaliland iyo dadka shacab ah oo dagaankaasi ku dhaqan ayaa ku waramaya in tirada dhimashadu ay gaarayso illaa 7 qof.
Nabadoon Xassan Faarax oo ka mida waxgaradka caanka ah ee gobolka Sanaag ayaa waraysi uu siiyay Radio Daljir ku xaqiijiyay inay korortay tirada dadkii ku dhintay dagaalkii shalay ka dhacay Ceerigaabo, waxaana nabadoonku uu intaasi ku daray inay galabta geer-yoodeen 4 ka mida ciidanka Soomaaliland oo qayb ka ahaa 9 askari oo uga dhaawac-may dagaalkii shalay, sida uu hadalka u dhigay nabadoon Xassan Faarax.
Wararka ay qorayaal dhammaan qaybaha kale duwan ee warbaahintu waxay ku waramayaa in dhimashadu ay markii hore ahayd 3 qof, oo 2 kamida ah ahaayeen ciidanka Soomaaliland, halka qofka kalena uu ahaa qof haweenay ah.
Magaalada Ceerigaabo ayaa habeenkii 2-aad bandaw ah, waxaana dadka deegaanku ay cabsi iyo wel-wel ka qabaan in dagaal kale dib uga qarxo deegaankaasi.